कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य !
काठमाडौं । कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन हामीले हरेक दिन देख्दै र भोग्दै आएका हुन्छौँ । तर ति कुराहरुको भित्रि रहस्य हामीमध्य धेरैलाई जानकारी नै हुँदैन ।
कुकुरका धेरै विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । सुँध्ने क्षमताका आधारमा कुकुर उत्कृष्ट स्थानमा पर्दछ । विभिन्न अनुसन्धानका क्षेत्रहरुमा कुकुरको भुमिकालाई लिएर चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन । तर आज हामी त्यस विषयमा नभई कुकुरको अर्को एक रहस्यका बारेमा बताउँन जाँदैछौँ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कपाललाई केहि दिनमै उमार्न मद्धत गर्ने यस्तो छ चमत्कारिक घरेलु उपचार विधि